Ihe ngosi Redmi Rịba 10 ga - eji igwefoto MP 108 kụọ ahịa ahụ. Gam akporosis
Ihe ngosi Redmi Rịba 10 ga - eji igwefoto MP 108 kụọ ahịa
Xiaomi ga - ekpughe usoro Redmi Rịba ama 10 n’oge na - adịghị anya, mana ọ bụghị afọ a. Nke a ga - abata naanị ụdị abụọ, nke ga - abụ ụdị ọkọlọtọ na Pro. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe ọ bụla mara banyere ekwentị abụọ ndị a, asịrị na ịkọ nkọ amalitelarị, na otu n'ime nkọwa izizi nke nkọwapụta teknụzụ nke Ihe ngosi RedN 10 na anyị enweworị na tebụl nwere ihe jikọrọ ya na igwefoto igwefoto ya.
Na ajụjụ, ndị tipster Ebe Nlele Dijitalụ, nke na-ebipụta akụkọ ya na Weibo, na-ekwu na ngwaọrụ nwere akara ngosi 'J17', nke bụ nke ekwesịrị ịbụ Redmi Rịba ama 10, A ga-eji kamera 108 MP kwadebe ya. Tinyere nke a, ị nwere ike ịnwe telephoto na nnukwu lenses.
Ekwuru na ekwentị a ga-adị ụdị nke Xiaomi Mi 10T Lite gbanwere ma gbanwee, ọnụ nke dị na China naanị, ọ bụ ezie na nke a bụkwa naanị asịrị, mana o meela nnukwu mkpọtụ, nke na-eme ka anyị kpachara anya maka ụdị ihe a.
N'iburu nke a n'uche, anyị na-enyocha njirimara nke Mi 10T Lite. Ekwentị a na-abịa na ihuenyo teknụzụ IPS LCD nke nwere 6.77-inch diagonal ma mepụta mkpebi FullHD + nke 2.400 x 1.080 pikselụ. Ọ na-abịa na ọkwa n'ụdị mmiri ozuzo nke nwere ụlọ 16 MP n'ihu ihe mmetụta nwere oghere f / 2.5.
Igwefoto azụ, ka ọ dị ugbu a, dị okpukpu anọ ma jikọta ya na onye isi 64 MP, nke na-esonyere oghere elekere 8 MP maka foto sara mbara na abụọ 2 MP maka ọnọdụ eserese na nnukwu macro. N'ezie, enwere ọkụ ọkụ abụọ.
Chipset processor na-abịa na Mi 10T Lite bụ Snapdragon 750G; ihe Ihe nhazi Snapdragp 765G Ọ ga-abụ ụdị ahọrọ maka Redmi Rịba ama 10T. Enwekwara 6 GB Ram na 64/128 GB ROM. Batrị nke ọnụ ya nwere 4.820 mAh ma ụgwọ ngwa ngwa nke 33 W.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ngosi Redmi Rịba 10 ga - eji igwefoto MP 108 kụọ ahịa
Etu esi hazie agwa n’ime N’etiti anyi
Mmelite kwụsiri ike nke gam akporo 11 dabere na OxygenOS 11 na-amalite ịbịaru OnePlus 8 na 8 Pro